Fiberglass zulazulani - China Wuqiang County Huili fiberglass
Fiberglass zulazulani eqondile camera nge Sizing silane ezisekelwe futhi luhambisana ne resin unsaturated, vinyl inhlaka epoxy resin. Kwakuvamise ukukhiqiza imigqa eyamukela, izinduku ehlukahlukene amaphrofayli.
1. fuzz Minimal ngesikhathi kucutshungulwa
2. Fast ezimanzi ukuphuma ezimanzi-ngokusebenzisa
3. Good fibre ukuhlakazwa kanye okusezingeni eliphezulu esiyinhlanganisela izakhiwo mechanical
4. imicu zivulwa kalula ukuze adalule sesigcilikisha zabo sakugcina ukusebenza
6. Ngisho wenkokhelo ukungezwani
7. izinga okuphansi zemihuzuko ezomile phezu Creel contact amaphuzu
ukusetshenziswa eziyinhloko zihlanganisa womshini zu amapayipi ka diameters ezahlukene, ephezulu ingcindezi amaphayiphi petroleum ukuhwebelana, izitsha ingcindezi, isitoreji amathangi, futhi, ukwahlukanisa izinto ezifana Umbuso izinduku kanye ukwahlukanisa tube.
fiberglass zulazulani - Le mikhiqizo kuphelile multiple of fiberglass okuqhubekayo (Splice khulula) intambo ntambo kusetshenzwe ungene umthamo high steel itolitji. Okukhethekile ingilazi azowalekelela ziyinkimbinkimbi ngokwemvelo futhi zidinga eqondile ukucutshungulwa izimo. Lo mkhiqizo itholakala Imicu yotshani ezifana Kevlar nezinye ARAMIDS. Ukusetshenziswa wabo oyinhloko e yezimoto ukuthungela izintambo njengoba impahla core futhi izintambo zezingcingo. Fiberglass azowalekelela ukunikeza wire & ikhebula emakethe high quality, ukusebenza eliphezulu futhi lubize kahle.
Fiberglass zulazulani uhlobo ingilazi fibre ekhethekile ongamelana ukuguguleka izinto ane-alikhali ezifana usimende. Ingasetshenziselwa ukuqinisa usimende (GRC), Gypsum nezinye izinto wezinto ezingaphili futhi organic, futhi ilungele steel futhi asbestos e-umthwalo esindayo non izingxenye usimende izindlela. Umkhiqizo nokusebenza ngokuvumelana amazinga kazwelonke kanye umkhakha, ukumelana alikhali ukuhlangabezana United States PCI (Prestressed Ukhonkolo Society) kanye nezidingo International GRC Association.
Zulazulani Direct iyahambisana thermosetting inhlaka, ezifana polyester unsaturated, vinyl ester, epoxy futhi inhlaka phenolic.
Zulazulani Direct kabanzi ngoba intambo widing futhi Pultrusion, esikhiqiza zulazulani nokwelukiweyo izindwangu multiaxial. Isicelo kufanele zu amapayipi, izitsha ingcindezi, Izinsimbi, amakhemikhali amathangi nokunye.